Nagarik News - सीधा–सादा तीजका पक्षमा
विशेषगरी महिलासित सम्बद्ध भएको चाड तीज मनाउँदा महिलाले बढी तामझाम र तडकभडक गरेर तीजलाई तन्काउन र तताउन खोज्नु राम्रो होइन। चाडको महŒव र सामाजिक अवस्थातिर ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध मनाइएको तीजले गत वर्ष शहरी इलाकामा तमासा नै गर्योर। सरकारले त्यसबाट पर्न गएको असरप्रति ध्यान दिएर यो साल दरमा दारु दन्काउन नदिने भएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टीप्यालेसमा तामझामसहित तीज मनाउन निषेध गरिएको छ। यसमा संस्कृतिप्रेमी महिलाले चित्त दुखाउने होइन, खुसी हुने ठाउँ छ।
महिनादिनअघिदेखि तीजकै हलचल! भाद्र शुक्ल तृतीया हरितालिका (तीज) को अघिल्लो दिन खाने दर हरिशयनीदेखि नै सुरु गर्नु आर्थिक, सामाजिक हिसाबले राम्रो देखिएन। धर्म, व्रतका करा त पछि नै छन्। विशेषगरी शहरी क्षेत्रका नारीहरूले होटेल, पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा लम्बेचौडे भोज गर्नु आडम्बर नै हो।
तीज जम्मा तीन दिन मनाउने हो। पहिलो दिन छोरीचेलीलाई दर खुवाइन्छ। दरमा पहिले दूधबाट बनेका परिकार, सेलरोटी, घिउ, दूध, दही, फलफूल आदि खुवाइन्थ्यो भने आजभोलि दरको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। त्यसमा मासु, माछाजस्ता मांसाहारी परिकार पनि थपिएका छन्। भोलिपल्ट केही पनि नखाइकन बस्नु पर्ने भएकाले राति अबेरसम्म महिलाहरूले दर खाने चलन छ।
भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीजको व्रत बसिन्छ। पौराणिक कथाअनुसार यस दिन पार्वतीले आफ्नो तपस्या पूरा गरी शिवजीलाई वर पाएकोले नाचगान गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ।
तीजको अन्तिम दिन ऋषिपञ्चमी हो।
हाम्रो तीज संस्कृति त निराहार व्रत बसेर (एकदिन पेट खाली राखेर) काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर शान्त मनले जुन कामना गरिएको छ त्यसप्रतिको एकाग्रता लिएर आस्थाका ईश्वरसित वर माग्ने चाड हो। पौराणिक इतिहास हेर्नोस्। पार्वतीले भगवान् शिवलाई पति पाऊँ भनेर निराहार व्रत बसेर आरम्भ गरेकी हुन् तीज परम्परा। उनी शिवलाई पति पाउन यो व्रतबाट सफल पनि भइन्। पार्वतीको मनोकामना पूरा भएको हुनाले नै तीजको महिमा र महŒव रहिआएको हो। नारीले पति कामना गर्नुमा पुत्रपुत्रीको चाहना पनि त्यसैभित्र पर्दछ। पतिको दीर्घ जीवनको चाहना गरेर मनाइने चाड हो तीज, यसमा परिवारका सुखशान्तिको पनि कामना गरिएको छ। पतिको दीर्घायु भनेको पत्नीको पनि दीर्घायु हो, पतिपत्नी भनेका एउटै अंग हुन् । दुई शरीर भए पनि पतिपत्नीलाई दायाँ र बायाँ भागको एउटै अंग मानेको छ शास्त्रले। व्रत पतिपत्नीकै हो। पत्नीले लिन नसक्दा यो व्रत पतिले लिनुपर्छ भन्ने कुरा पद्धतिमा उल्लेख छ। नारीले वर्षभर जानेर, नजानेर, सकेर, नसकेर गरिएका पापकर्मको प्रायश्चित्त गर्ने चाड हो तीज।
दिनहुँ नुहाउन नसक्दा तीजपञ्चमीकै दिन ३ सय ६५ पटक दतिउनले दन्तधावन गरेर, नुहाएर पूजा गर्दा वर्षभर नुहाएर पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ भन्छ शास्त्र। रजवती महिलाले गरेका छुवाछुतको पाप कटनी गर्न ३ सय ६५ पटक महास्नान गरेर शरीर र मनको मैलो पखाल्ने विशेष चाड हो तीज। पाप र धर्म भनेको के हो र पापको परिणाम के हुन्छ भनेर ऋषिपञ्चमीको व्रतकथामा लेखिएको छ तीजको महिमा। परोपकार र मानवताका कुरा हाम्रा अठारै पुराणमा उल्लेख भएको पाइन्छ। तीजको व्रतकथामा पनि ती कुरा उल्लेख छन्। मातृहृदय राम्ररी झल्काएको पाइन्छ हरितालिका र तीजपञ्चमीका व्रतकथामा। भावना र विचारलाई मातृत्वमा झुकाउने चाड हो तीज।
हिन्दूशास्त्रमा मानवता, आचरण, परोपकार, क्षमाका कुरा, मन वचन र कर्मको पवित्रताजस्ता मानवीय गुणहरूको वर्णन गरेको पाइन्छ। एकपटक सबै महिलाले तीजको व्रतकथा सुन्नु उचित हुन्छ। समयसमयमा यस्ता पापपुण्यका कुरा कथापुराणबाट सुन्नाले मनलाई उचित बाटोतिर लाग्ने प्रेरणा दिने हुनाले पुराणले मानवलाई सत्मार्गको बाटो देखाएको हुन्छ। व्रतपूजा गर्नाले मनमा गुम्सिएर रहेका नराम्रा विचार पन्छाउन सकिन्छ। व्रतको विशेषता यो पनि हो।
आफू–आफूमात्र भोजमा लट्ठिएर मनाउने खालका खानपिनतिरमात्र लाग्दा हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बिर्सन सक्छौँ। के खान हुन्छ र के खान हुँदैन भन्ने पनि बिर्सन सक्छ तल्लो पिढीले। हाम्रा पछिल्ला पुस्ताले तीजको महिमा र महत्व भुल्न सक्छन्। दानपुण्य गरेर मनशान्ति गर्ने चाड हो तीज । तीज के हो भन्ने चिनेर चिनाएर मनाउनु उचित हुन्छ।
डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा प्रकरणको करिब–करिब पटाक्षेप भएको छ। वरिष्ठ नेताको सूत्रलाई पार्टीको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा इन्चार्जहरूको बैठकले अनुमोदन गरेर समस्याको टालटुले समाधान निकालिएको...
पहिलो गुलाब : कक्षा १० मा पढ्दाखेरी पहिलो गुलाब पाएकी थिएँ। केटो मभन्दा जुनियर कलासको थियो। उसले गुलाबसहित प्रेमपत्र मेरो हातमा थमायो। अरू के के भन्यो, सुनिनँ। त्यो गुलाब र त्यो...
त्यो 'म्याक्रो' मुस्कान
'म्याक्रो मुस्कान' क्या सुहाउँथ्यो उनलाई। म्याक्रो अर्थात् बृहत् अर्थात् विशाल। त्यो जिउँदोजाग्दो, त्यो भव्य र त्यो म्याक्रो मुस्कान! 'माइक्रो' (बस) को टायरले कुल्चिदियो त्यो म्याक्रो मुस्कानलाई। (म्याक्रोको विपरीतार्थ माइक्रो!)